नवजात शिशुको हत्या गरी फरार महिला सात वर्षपछि पक्राउ – Enepali News
June 12, 2020 904
३० जेठ,काठमाडौं । अवैध गर्भाधानबाट जन्मिएको नवजात शिशुको हत्या गरी फरार भएकी एक महिलालाई प्रहरीले ७ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । पर्वतको साबिक आर्थर गाविस वडानम्बर ७ की ४७ वर्षीया अमृता भनिने तारा नेपालीलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको हो ।
Prevरुकुम घटना बन्यो झन् रहस्यमय, भयो नयाँ खुलासा ! शवहरु त खरानी भए तर अहिले भेटिए यस्ता प्रमाण !
Nextबैशाख र जेठमा छापियो झन्डै साढे दुइलाख ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र